Suuxdinta - Furaha timahaagu inay si dhakhso leh u koraan | Bezzia
Susana godoy | 07/04/2021 12:00 | Quruxda
Maaha markii ugu horeysay ee aan dooneyno inaan aragno sida timaheena ay dhakhso ugu koraan. Hagaag, xaqiiqdii waad awal yara daashay inaad raadiso dhamaan noocyada xalka. Maanta waxaan arki doonnaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, oo aan ku haysanno farahayaga laakiin laga yaabee inaanan had iyo jeer siinaynin ahmiyadda ay dhab ahaan u sidato: exfoliation.
Sababtoo ah sida ku dhacda jirka intiisa kale, soo bixiddu waa geedi socod si weyn kor ugu qaadaya maqaarkayaga. Sababtaas awgeed haddii aan ka fikirno timaha, ama taa bedelkeeda madaxa, laga tagi maayo. Ma rabtaa inaad ogaato tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo?
1 Maxay daahirintu fure ugu tahay koritaanka timaha dhaqsaha badan?
2 Madaxa ku daaji qaxwada
3 Sonkor iyo saliid saytuun ah timahaaga
4 Sonkor iyo liin dhanaan
Maxay daahirintu fure ugu tahay koritaanka timaha dhaqsaha badan?
Sidaan ognahay, exfoliate waa macsalaameyn unugyada dhintay. Sidaa darteed, markaan ku sameyno maqaarka, waan tirtiri doonnaa dhammaan wixii siyaado ah, si aan boos uga dhigno horumar. Xaaladdan oo kale, wax la mid ah ayaa dhacaya maxaa yeelay waxa aan samayn doonno ayaa ah in maqaarkayaga la nadiifiyo, oo had iyo jeer u baahan. Waa aag ay baruurtu u egtahay in ay ku ururto xaalado badan, halka kuwa kale ay tahay qalalan. Sifeyn wanaagsan ayaan ku caawin doonnaa maqaarka aaggan, si aan u sagootino haraaga wax soo saarka qaarkood oo had iyo jeer ku sii jira timaha iyo kicinta wareegga si timuhu ay u bilaabmaan inay ka sii xoog bataan sidii hore. Waxaad arki kartaa intaas oo dhan mahadsanid adoo adeegsanaya dawooyin dabiici ah oo aan soo jeedineyno.
Madaxa ku daaji qaxwada
Budada kafeega waa mid ka mid ah daawooyinka ugu badan ee la isticmaalo marka aan dooneyno in aan xoqno. Intaas waxaa sii dheer, waa walax aan dhammaanteen guriga ku leenahay hubaal. Marka, waxaan u baahanahay 4 qaado oo qaxwo ah si aan u bilowno diyaarinta isku darkeena. Laakiin si duugistu u noqon karto mid dhammaystiran oo ay xitaa noogu fududdahay, wax la mid ahi ma jiraan Qaxwaha ku qas laba qaado oo yogurt dabiici ah ama haddii aadan haysan, saliid qumbaha yar. Marka taasi waxay inbadan inaga caawineysaa marka aan sameyneyno duugista. Tani waxay la socon doontaa faraha, adigoon saarin cadaadis aad u badan oo si fiican u daboolaya aagga oo dhan.
Sonkor iyo saliid saytuun ah timahaaga
Ikhtiyaar kale oo lagu sameeyo dab-bakhtiiye ayaa ah inuu naga caawiyo sonkorta. Granites-kaaga ayaa sidoo kale nooga tagi doona natiijo aad u wanaagsan oo aan ka fiirsano. Laakiin waa run inaan marwalba ku qasbanaaneyno inaan ku darno wax kale, si ay si fiican ugu kor wareegto maqaarka. Xaaladdan oo kale, waxay noqon doontaa saliidda saytuunka. Sidaan sifiican u ognahay, tan ayaa mas'uul ka ah bixinta fuuq-celinta, marka lagu daro baabi'inta dhammaan noocyada qashinka oo na siiya antioxidants. Waa fikrad kale oo ka mid ah fikradaha aan jecel nahay in lagu fududaado fulinta iyo natiijooyinkeeda waaweyn.
Sonkor iyo liin dhanaan
Daaweyntani waxay ku habboon tahay dadka leh maqaarka timaha dufanka leh. Maxaa yeelay sida aan ognahay liinku wuxuu mas'uul ka noqon doonaa xakameynta saliida. Markaa iyada, sonkorta ayaa imaan doonta, taas oo mar labaad mas'uul ka noqon doonta jiidista dhammaan wasakhda aan haysanno. Daawooyinka sidan oo kale ah, waxna ma jecla inay lahaadaan isla cabir ka mid ah maaddada iyo mid kale. Sidoo kale, xusuusnow in liinta ku jirta timahaaga, haddii aad qorraxda hesho, ay ka dhigi karto mid fudud. Marka, fikradaha noocan ahi had iyo jeer way kafiican yihiin in la sameeyo habeenki markaanu sii soconayn. Timahaagu waa inay yara yaraadaan marka aad aadeyso si aad u dalbato. Laga bilaabo halkan, waxaad ku bilaabi doontaa duugista wareega ah iyo daqiiqado yar ka dib, waad dhaqi kartaa timahaaga sidii caadiga ahayd. Xaqiiqdii waad arki doontaa saameynteeda si dhakhso leh!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Sifeynta jirka ayaa fure u ah in timahaagu dhaqso u koraan